QR Code System for Interbank payment likely to launch this year
Govt Claims to Have Created 18,352 Jobs in June
Domestic Steel Producers Struggle from Foreign Competition
MIC cuts service charges by 50 percent
ဗဟိုဘဏ်က နိုင်ငံခြားဘဏ် ၇ ဘဏ်ကို ထပ်မံ ခွင့်ပြု
နိုင်ငံခြားဘဏ် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်က ကြေညာခဲ့ပြီး ရရှိလာသော ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာများကို စိစစ်အကဲဖြတ်ပြီးနောက်တွင် လိုင်စင်ချထားရေးကော်မတီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားဘဏ် ၇ ခုအား ယနေ့ ကနဦးအတည်ပြုလိုက်သည်။ ခွင့်ပြုလိုက်သော ဘဏ်များမှာ Bank of China Hong Kong (Branch License), Cathay United Bank (Branch License), Industrial Bank of Korea (Subsidiary License), KB Koomin Bank (Subsidiary License), Korea Development Bank (Branch License), Mega...
KBZ Introduces Credit Assistance Program for SMEs
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် With the economic fallout from COVID-19 impacting small and medium-sized enterprises (SMEs) across Myanmar, KBZ Bank has introduced the COVID-19 Credit Assistance Program for SMEs to provide urgent financial relief to its existing and new SME customers. Under the program, launched on 11 June 2020, SMEs can apply...
Myanmar approves new three insurance policies
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The Ministry of Planning, Finance, and Industry has issuedanotice on May 12 allowing eight general insurance companies and Myanma Insurance to sell new insurance products across the country namely Industrial All Risk, Construction All Risk/ Erection All Risk, and Baliee's Liability Insurance. However, all of these...
MIC approves 12 more investments
English Text Below Covid-19 ကာလအတွင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(၁၂)ခုထပ်မံခွင့်ပြု Covid-19ဖြစ်ပွားနေသောကာလအတွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ရာ၌ အရှိန်အဟုန်မပျက်စေရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(၁၂)ခုထပ်မံခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ခွင့်ပြုလိုက်သော လုပ်ငန်းများ၌ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(၈)ခု၊ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(၄)ခုပါဝင်ပြီး၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတွင် အိမ်ယာအဆောက်အဦးကဏ္ဍ(၁)ခု၊ စက်မှုကဏ္ဍ(၅)ခုနှင့် အခြားကဏ္ဍမှ(၂)ခု၊ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတွင် စက်မှုကဏ္ဍ(၁)ခု၊ အိမ်ယာအဆောက်အဦးကဏ္ဍ(၁)ခု၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကဏ္ဍ(၁)ခုနှင့် အခြားကဏ္ဍမှ(၁)ခုတို့ဖြစ်သည်။ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါစတင်တွေ့ရှိခဲ့သော မတ်လကုန်မှလက်ရှိမေလဆန်းပိုင်းအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝင်ရောက်စေရန် နှစ်ကြိမ်တိုင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုခွင့်ပြုခဲ့သော လုပ်ငန်း(၁၂)ခုအပါအဝင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း(၃၇)ခုကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ လက်ရှိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ထားမှုမှာ လုပ်ငန်းပေါင်း(၁၆၂)ခုမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကန်ဒေါ်လာ(၃ဒသမ၃)ဘီလီယံကျော်ဝင်ရောက်ထားပြီး နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း(၇၃)ခုမှ ကန်ဒေါ်လာ(၂၅၃)သန်းကျော် အပါအဝင် ကျပ်(၁၂၅)ဘီလီယံကျော်ဝင်ရောက်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ စာရင်းများအရသိရသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ပက်သက်၍ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော Covid-19 ကြောင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်...
Myanmar needs to bring in whole ecosystem instead ofafactory: Serge Pun
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Hundreds of thousands of migrant workers are returning home due to the COVID-19 pandemic, which caused factories to suspend their operations. This can worsen the unemployment rate in the country where there is strangely no official unemployment rate. The government of Myanmar is trying to findaway...
Telenor Group has announced today that it has entered into an agreement to sell 100 percent of its mobile operations in Myanmar to M1 Group for a total consideration of 105 million USD (approximately 900 million NOK), of which 55 million USD (approximately 470 million NOK) isadeferred payment over five years. The...
Indian Oil Company Invest Additional $120 Million in the Shwe Gas Project
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် India's ONGC Videsh Ltd (OVL) will invest over $120 million in the Shwe Gas project, according to the Financial Express. The investment proposal was approved by the cabinet meeting held by the Indian Prime Minister. ONGC Videsh Ltd (OVL), an overseas investment subsidiary of ONGC, has made $722 million...
Tax on cigarette and liquor planned to raise
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The 2020 Union Tax bill plans to raise special item tax levied on cigarettes and liquor up to K27 per pack for cigarettes, 60 percent of the price for liquor and beer, and 50 percent of the price for wines. “We, in line with the country’s health policy,...
Ayala Invests $237.5 Million for 20 Percent of Yoma Strategic, FMI
Ei Thandar Tun/Myanmar Business Today Leading Philippine conglomerate Ayala Corporation has invested $237.5 million fora20 percent stake in Singapore-listed Yoma Strategic Holdings and its affiliated company, Yangon-listed First Myanmar Investment (FMI). Ayala’s acquisition represents one of the largest foreign direct investments into Myanmar and the largest-ever investment into the...